Shiinaha Soo Saaraha Soo Saaraha Bullaacadda Soo Saarayaasha & Soo Saarayaasha | Winclan
Taxanaha YW ee bambooyin bullaacadaha biyaha hoostooda lagu soo saaro waxaa soo saarey shirkadda iyadoo lagu saleynayo nuugista tiknoolajiyada casriga ah ee loo isticmaalo samaynta wax soo saarka. Waxay leedahay faa'iidooyin hufnaan sare, ka-hortagga fuulista, xaddid la'aanta, isku xirnaanta otomaatiga ah, kalsoonida, iyo otomatiga xakamaynta. waxaa ka mid ah muuqaal u gaar ah marka laga hadlayo ka saarista walxaha adag iyo qashinka dhaadheer ee dhaadheer.
Bambooyinkani waxay ku yimaadaan dhexroorro ah 50-600mm, oo leh qulqulka socodka 10-7000m3 / H, madaxa 5-60m, awoodda abd ee 1.5-315KW, oo awood u siinaysa marinka walxaha adag ee dhexroorrada 20-148mm.
Isticmaal iyo Muuqaallo
YW taxane ah bambooyin bullaacadaha biyaha lagu quusiyo ayaa inta badan loo adeegsadaa mashaariicda dowladda hoose, iyo wax soo saarka, hopsital, shaqooyinka dhismaha, hoteelada, iyo maqaayadaha beeraha, si looga qaado dheecaannada ay ku jiraan walxaha la iibiyay iyo dhammaan noocyada walxaha qaabab fiilooyin dhaadheer leh, sida dhoobada, Biyaha wasakhda ah iyo wasakhda guryaha wasakhda ah ee wasakhda-wasakhda ama sunta ah. Bambooyinkani waxay leeyihiin faa'iidooyin isu-ekaansho iyo wax-qabad sarreeya, oo u oggolaanaya otomaatiga heerarka biyaha sida loo baahan yahay oo ay ku jiraan aaladda ilaalinta otomatiga ah, kabadhada kontoroolka, iyo nidaamka rakibidda laba-tareen oo otomaatig ah.
1.Mashiirku wuxuu noqonayaa saddex waji oo AC ah oo leh danab lagu qiyaasay 380V (660V) iyo inta jeer ee 50 Hz.
2. Heerkulka dareeraha waa inuusan ka badnaan 40 ℃
Qiimaha PH ee dareeraha waa inuu ku dhexjiraa 4-10.
4Qiyaasta waxyaabaha adag ee dareeraha ku jira muggu way ka yaraan doonaan 2%.
5. Cufnaanta dareeraha waa inay ka hooseysaa 1.2 * 103kg / m3.
Xaraashka Bamka Daata-147-P03
YH Madaxa Madaxa Sare ee Sifeeyaha
YA Dahaadhida Bamgareeye
Bamka qasacadaysan ee 'impeller-147-P50'